Income Ukuvulwa Komqwaqo Inkosi – eHowzit
Income Ukuvulwa Komqwaqo Inkosi
INKOSI yesizwe saKwaNzimakwe uBhekizizwe Nzimakwe ibonge ukuvulwa komgwaqo osufakwe itiyela u-P69 ngoLwesibili ezinkundleni zaseNkoneni yase inxusa uNgqongqoshe wezaMasiko nobuCiko eKZN uNtombikayise Sbhidla-Saphetha ukuthi acele uNgqongqoshe wezokuPhepha nokuXhumana koMphakathi uMhlonishwa uWillies Mchunu ukuthi abasize ngokuthi balungisele umgwaqo waseThongasi ngoba mubi uphazamisa izimoto, othisha nabafundi uma beya ezikoleni. “Ngiyakuphathisa Ngqongqoshe ukuthi utshele uMacingwane ukuthi asilungisele umgwaqo waseThongasi ngoba mubi kakhulu. Lo mgwaqo uphazamisa othisha, izingane kanye namatekisi asuke ethutha abantu abaya emsebenzini. Into ohlupha ngayo lomgwaqo ukuthi unamabhuloho aphansi nadinga ukuphakanyiswa. Uma ngikhuluma ngomgwaqo ngisuke ngingawalibele amabhuloho lawa asihlupha ngokugcwala amanzi uma lina ngoba aphansi kakhulu adinga ukuphakanyiswa,” kuzikhalela inkosi. UNzimakwe uphinde wabalula ukuthi lomgwaqo obuvulwa awuphelile usadinga ukuqedelwa.
UNgqongqoshe USbhidla obemele uMchunu evula umgwaqo uthe uzowudlulisa kuMchunu umyalezo. Lo mgwaqo ongamakhilomitha ayishumi ubize izigidi eziyi-R78 zamarandi. Namuhla sizovula lo mgwaqo kodwa ngeke sijabule uma kugingqika izimoto kuwo noma abantu babambe umbhikisho bese bewulimaza ngoba lokhu kubuyisela emumva umsebenzi kahulumeni asuke ewenzile.
“Ngizwile okushiwo yinkosi ukuthi icela ukuthi yakhelwe umgwaqo, ngizofike ngimtshele uMacingwane. Ngiyavuma ukuthi umgwaqo awuphelile nakho lokho ngizomtshela uMacingwane futhi,” kusho uSbhidla-Saphetha.
UNgqongqoshe weziMali u-Ina Cronje uthi uhulumeni usesebenze kakhulu eminyakeni ewu-20 ethuthukisa abantu.
“Namuhla sigubha iminyaka engama-20 kwafika intando yabantu eyaqala ngonyaka ka-1994. Sinesizathu esimqoka sokuthi kungani sigubha le minyaka. Kungangimangalisa uma kukhona ongazi ukuthi kungani sigubha iminyaka yenkulululeko. Kulemi nyaka kuningi osekwenziwe nguhulumeni ethumela izidingo ezifana nogesi, amanzi, izindlu, imigwaqo, izikole, izibonelelo, izimpesheni kanye nemitholampilo. Sisazimisele singuhulumeni wentando yeningi ngokuthuthukisa izimpilo zabantu abakithi uma ningaqhubeka nokusivotela,” kuphetha uCronje